यी हुन् संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अनुपस्थित सांसद् : ऐतिहासिक अवसरमा यीनिहरु कहाँ हराए ? – Butwal Sandesh
यी हुन् संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अनुपस्थित सांसद् : ऐतिहासिक अवसरमा यीनिहरु कहाँ हराए ?
काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रको जीवनमा एकदमै महत्व राख्ने ऐतिहासिक दिनमा प्रतिनिधिसभाका १६ सांदद भने अनुपस्थित भएका छन्।
स‌सदको तल्लो सदन प्रतिनिधसभामा १७५ सदस्य मध्ये बैठकमा २५९ जना मात्र संविधान स‌शोधनको महत्वपूर्ण समयमा उपस्थित भए । त्यसमध्ये एकसय ५८ जनाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरे भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संशोधनको प्रक्रिया संचालन गरे।
अनुपस्थतहरु सांसदहरु मध्ये हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी, मोहम्मत अफ्ताब आलम जे*लमा छन् भने सा‌सदहरु बिजयकुमार गच्छदार निलम्बित छन्।
तर केही सांसदहरुले भने रहस्यमय ढंगले अनुपस्थति जनाएर उनीहरुको राष्ट्रियता प्रतिको निष्ठामै प्रश्न गर्न ठाउँ दिएका छन्। त्यस्तो प्रश्न उठेकाहरु मध्ये जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधनकै विपक्षमा स‌ंशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि स‌ंसद् ब*हिस्कार गरि्न्।
उनले संसद बहि*स्कारपछि आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको आ*क्रोस पोख्दै गर्दा थप मूर्खतापूर्ण अविव्यक्ति दिदै त्यसलाई महिलामाथीको अ*पमानका रुपमा व्याख्या गरिन्। आफ्नो व्याख्याको औचित्य स्थापित गर्न गिरीले पाकिस्तानी आर्मीले महिलामाथी ब*ला*त्कार गरेका कारण बंगलादेश जन्म दिएको भन्दै देश टुक्रिन सक्ने रा*ष्ट्रवि*रोधी अभिव्यक्ति दिइन्।
सरिता गिरीले घोषित रुपमा बहि*स्कार गरेपनि सा‌ंसदहरु अमृतादेवी अग्रहरी, गोपालबहादुर ब*म, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल भने कारण नखुलाई अनुपस्थित भएका छन्।
अघोषित रुपमा सांसदमा अनुपस्थित भएका उनीहरुको अनुपस्थिति भने आम नागरिकका लागि प्रश्न गर्ने आधार बनेको छ। उनीहरु अबका दिनमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र देखि आम नागरिकको प्रश्नको तारो बनेका छन्। उनीहरुको उपस्थिति नभएपनि उपस्थित सबै सांसदले संविधान संशोधनका पक्षमा मत दिँदा संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको छ।